Budata ụlọ ọrụ gọọmentị maka Samsung Samsung | Gam akporosis
Eder Ferreño | | ROM, Samsung, Nkuzi
Nyere nsogbu nke ọtụtụ ndị ọrụ nke Gam akporosis ịlaghachi n'ọnọdụ ya, na ukara firmwares maka Samsung ọnụ, na ọtụtụ ajụjụ ya site na blog; Ekpebiri m ịde edemede a tinyere vidiyo nkọwa iji kụziere gị otu esi eji atụmatụ ọhụrụ nke weebụsaịtị nke sammobile.com.
En sammobile.com anyị nwere na anyị nwere, kpamkpam n'efu, ọ bụla mbụ firmware maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọnụ ọgụgụ ndị nnukwu mba Korea.
Na vidiyo a na-akọwa m na-anwa ịkụziri ndị ọrụ ntakịrị ntakịrị furu efu, otu esi eji weebụsaịtị ahụ e kwuru n'elu ka ha nwee ike nweta ihe ịga nke ọma femụwe download chọrọ maka ngwaọrụ gị.
Iji jiri weebụsaịtị nke sammobile.com anyị ga-achọ naanị Samsung ọkwọ ụgbọala ma denye aha na ya n'efu, usoro dị mfe na ngwa ngwa nke na-agaghị ewe anyị karịa nkeji.
Ozugbo e debanyere aha anyị ga-enwe ohere ịnweta mmadụ niile ukara Samsung firmwares, ọ bụghị naanị ndị ọrụ gọọmentị maka ọnụ na sistemụ arụmọrụ android, na ọ bụ na sammobile.com anyị nwekwara ike ịchọta firmwares kwekọrọ na njedebe ya na sistemụ arụmọrụ Bada, Windows Phone, Symbian na Limo.
Ozugbo ebudatara faịlụ ndị dị mkpa, na nke a ọ bụ oge anyị android, anyị ga-ewepu faịlụ faịlụ ma gbaa ya ọsọ site na OdinMaka nke a, m na-akwado ịgbaso usoro nke nkuzi dị iche iche e kere maka ngwaọrụ dị iche iche, ebe onye ọ bụla nwere ngwa ọrụ aka ya iji rụọ ọrụ ya yana usoro ọkụ ya dị iche iche.
1 Etu esi melite ekwentị gị na ngwa ngwa ọhụụ
2 Ebe ibudata ngwa ngwa maka Samsung
Etu esi melite ekwentị gị na ngwa ngwa ọhụụ
N'ihe banyere Samsung, mmelite na-ewe ogologo oge iji ruo ndị ọrụ niile. N'ihi nke a, ndị kacha nwee ndidi wụnye femụwe si mpaghara ọzọ na ekwentị gịya mere ha agaghi echere OTA. Nke a ga - enyere gị aka imelite ekwentị gị tupu oge eruo. Mgbe mmelite a dị na mpaghara gị, ịnweghịzi ịnata OTA, n'ihi na ọ kwesịrị ịchọpụta na ị nweelarị firmware ọhụrụ ahụ, nke bụ nke mmelite ahụ kwuru. Maka mmelite na-esote, ihe kwesiri ekwere bu na inara OTA n’enweghi nsogbu. Mana ị nwere ohere ibudata mmelite na aka gị, ọkachasị n'ihe gbasara nwelite ngwa ngwa ewepụtara maka ekwentị.
Ọ bụrụ n’ịchọghị ichere maka mmelite na-abata, anyị nwere ike ibudata ngwa ngwa site na mpaghara ọzọ, na ebe nrụọrụ weebụ dịka Sammobile ma ọ bụ Stockrom. Typesdị faịlụ ndị a ka enyere anyị aka na ibe ndị a. Yabụ, ihe mbụ anyị ga - eme bụ ibudata ya, nke ị ga - eme na kọmpụta gị, ịnwe faịlụ a adịla ma nwee ike bido.
Ozugbo anyị kwuru femụwe ebudatara, oge eruola ịwụnye ya. Usoro dịtụ mgbagwoju, na mgbakwunye na-agbanwe ọtụtụ dabere na ika nke ekwentị. Ọ dabara, na peeji nke ebe ebudatara ha, enwere ntuziaka, ebe anyị nwere ike ịgbaso usoro nke ọ bụla ihe anyị ga-eme, ka anyị wee ghara ihie ụzọ. Failuredị ụdị n'ụdị usoro a nwere ike ime ka ekwentị ghara iji ya rụọ ọrụ. Ya mere, ị ga-akpachara anya.
Na ụfọdụ ekwentị, ị nwere ike iji ABD nwee ike ịwụnye ya na ekwentị. Na ụdị ndị ọzọ, dịka na Samsung, ị ga-eji ọnọdụ nbudata wee jiri Odin jiri ekwentị jikọọ na PC, ka e wee tinye ya. Brandsdị ndị ọzọ na-eme ka ọ dị mfe, dịka ọ dị na ASUS, ebe ị ga - e copyomi faịlụ ahụ na ebe nchekwa ekwentị ma regharịa. N'ọnọdụ niile, ihe dị mkpa bụ ịgbaso ntuziaka, nke na-akọwa ihe ị ga-eme dabere na ekwentị ị nwere na ikpe gị.
Ebe ibudata ngwa ngwa maka Samsung
E wezụga Sammobile, e nwere ihe ọzọ ezi nhọrọ-enwe ike mfe ibudata ukara Samsung femụwe. Weebụsaịtị a bụ Stockrom, nke ị nwere ike ịga na njikọ a. Na weebụsaịtị a ọ ga-ekwe omume ịnweta ngwa ndị a nke akara Korea, nke ị ga-enwe ike ibudata na ekwentị gị. A na-edebe ha ruo oge na ọtụtụ nhọrọ na nke a.
Isi mmalite - sammobile.com
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Etu ibudata ngwa ọrụ gọọmentị maka ọnụahịa Samsung
Ihe 43 kwuru, hapụ nke gị
Kachasị mma mgbe sistemụ agbanweela ọtụtụ. Hapụ ya ụlọ ọrụ mmepụta ihe 🙂 na-arụ ọrụ 100%
Ọ na-mgbe na-atụ aro mgbe wụnye a ole na ole roms, ịrụ ihe echichi nke mbụ femụwe nhicha ihe niile.
Ndewo, ezigbo enyi Francisco, enwere m ajụjụ. Azụrụ m ọnwa ole na ole gara aga galaxy s3 mini model GT-I8190 nke na-eweta elekere. 4.1.1 ma wepu ụdị nke mbụ ahụ ma wụnye ụdị esiri ọzọ, ugbu a achọrọ m ịtinye nsụgharị mbụ, budata rom site na saịtị ngwa ngwa nke dị 657 mb mana na faịlụ abịakọrọ naanị nwere faịlụ a na-akpọ HOME_I8190LUBALJA_I8190LUWAALJ4.tar.md5 ma ọ naghị eweta ihe ọzọ, Ugbu a amaghị m otu esi esi wụnye ya na Odin ebe ọ bụ naanị na ọ na-eweta faịlụ ahụ na m chere na pda, mana otu m si eme maka nhọrọ ndị ọzọ karịa Modem na CSC.
Enyemaka gị na ikwu.
Zaghachi Juan Carlos Rosales Guevara
Ọ na-aga PDA, achọrọ ihe niile ịchọrọ na nke ahụ. Tar.
Na 15/04/2013 00:26 PM, «Disqus» dere, sị:
Ekele, m ga-agba ule.
Ndewo onye ọ bụla, enwere m Samsung Galaxy Amp SGH I407 ekwentị na-achọ Rom na Sammobile ahụbeghị m ya. Biko, achọrọ m enyemaka gị n'ihi na ahụbeghị ngwaahịa Rom ebe ọ bụla. Ọ dị ka ọ bụrụ na ụdị a esighi na Samsung. Ọ bụkwa Aio nke na-egosi dịka ozi achọrọ si United States. Ọ bụ Samsung mbụ na-enye m isi ọwụwa. Daalụ ekele.
Zaghachi Luis Manuel Lupiáñez León
Olee otú m ga-esi mee ya? Achọrọ m ịhapụ ya na nke bịara imelite site na ota
Kedu ụdị akara ị nwere?
Ọ dị mfe dịka nbudata ngwa ngwa ma na-egbu ya na ọnọdụ nbudata site na ọdin.
Paco zaa m ajụjụ ole na ole. Maka Galaxy S I9000. Achọpụtara m na maka Spain enwere nhọrọ FOP femụwe dịnụ na ndị ọrụ.
Kedu ihe FOP.
E wezụga nke ahụ, ọ bụrụ na m jiri Yoigo ma wụnye ngwa ngwa sitere na ụlọ ọrụ ọzọ, enwere nsogbu? Ọ na-akwụsị ịhapụ ya ma m wụnye nke onye ọzọ? Ma ọ bụ naanị ihe ọ na-eme bụ ịwụnye ngwa nke ụlọ ọrụ ọ bụla na-etinye na ndabara na ntanetị ọhụrụ ha?
N'agbanyeghị ụdị ngwa ngwa ị wụnye, ekwentị ahụ ga-anọgide na-akwụghị ụgwọ, naanị ihe ị ga-enweta bụ paswọọdụ mbụ nke onye ọrụ na ajụjụ yana ngwa ndị arụnyere na mbụ.
I gakwa etinye apn na aka.
Na 05/04/2013 01:31 PM, «Disqus» dere, sị:
Enyemaka achọrọ na Samsung Lee ga-amasị m ịkwalite
ngwanrọ gị, abanyela m nhọrọ nhọrọ Software ma ọ gwara m na (Mba
Enweghị faịlụ melite firmware) Kedu ka m ga - esi mee ya? Ma ọ bụrụ na i nwere ike
wụnye ọzọ nke femụwe.
Zaghachi Pedro Alejandro Carias Fuentes
Maazị Francisco, daalụ maka ozi ahụ. Enwerem Samsung Corby ma achọrọ m iji Flash ya femụwe maka samsung genoa c3510. dị ka m nwere otu akụrụngwa ngwaike. ọ ga-arụ ọrụ? ndụmọdụ ọ bụla? ekele =)
Obinna Okpala dijo
Ndewo ndị mmadụ, ihe na-eme m ugbu a bụ na enweghị m ike ịnweta rom ngwaahịa ọ bụla maka galaxy m i8260 n'ihi na cerro na sammovile hotfiles nwere ngwa ngwa niile, ọ dịkwa ngwa ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ya ma ọ bụ nwee nkwado ndabere, m ga-enwe ekele maka ya ọtụtụ 🙂
ndewo ndi m choro ihapu nsogbu m qx eziokwu Enwere m ihe ojoo m nwere edetu nke 2 na otu izu gara aga mmadu malitere iku, mmadu mara ihe m g’eme iji dozie nsogbu a? enyemaka x faaa..thank
Hi Francisco, m bi na Venezuela ma ha wetara m Samsung Galaxy Core I8260 si Spain, akara m sitere na movistar na enweghị m ike ijikọ nke ọma na ikpo okwu ahụ, enwere ike ịme ya na Edge, ị nwere ike inyere m aka, ha na-agwa m na m ga-etinye ngwa ngwa maka Venezuela, mana n'ezie enwere m ntakịrị ihe furu efu, enwere m ekele maka mmekọrịta niile ị nwere ike inye m. Echiche kacha mma
Ndewo ndị enyi, kedu ka m ga eji budata ụdị sọftụwia ọ bụla?
anwụ na-acha dijo
kedu ka ị mere FRANCISCO !! Biko, ekwesịrị m ịbanye na akaụntụ sammobile ma enweghị m ike ịdebanye aha ... ihe onyonyo a anaghị enye m! Etinye m bad rom ma m gbanwee imei !! Ọ bụ nnukwu neo i9060l si Argentina (n'ezie) .. site ugbu a gawa, daalụ !!
Zaghachi anwụ na-acha
Ndewo Francisco Ruiz! Ọ ga-abụ n'efu ụgbọelu ma ọ bụrụ na m na-eji a Sammobile femụwe?
Ndewo Francisco, ị maara na ha nyere m s2 i9100 iji hapụ ya, m gbanye ya na kingoroot wee nyefee ya z3x ka ọ hapụ ya, m wee nye ya onye ọrụ dị elu na-agụ ya n'enweghị nsogbu na ihe niile na mberede m nwetara ihe dị ka ịkwụpụ ekwentị, ọ nwere ike mebiri emebi na enwere ebe a na ọ chọghị ịgbanye ọzọ ma ọ bụ pc na-amata ya ma ọ bụ na ọ jidere ọnọdụ mgbake ma ọ bụ ọnọdụ nbudata ma jiri batrị ọzọ nwalee ya ma ọ nweghị ihe dakwasịrị peeler na na ọnụọgụgụ ọ na - ebuli dị ka a ga - agbanye ma ọ gosipụtaghị ihe ịrịba ama nke ndụ ị nwere ike inyere m aka, m ga - enwe ekele maka ya…
Ndewo, kedu ka ị mere ... M wụnye ihe nkiri niile ahụ n'ụzọ zuru oke mana ekwentị na-atụgharị m na ọ na-adabere na logo samsung :, (.. gịnị ka ị kwadoro?
Ndewo m chọrọ ịma otu esi egbu maramara Samsịn I9060M
Zaghachi mauriciovillanueva2010o Villanueva
Ndewo, etinyegoro ngwa ngwa site na sammobile na odin na isi m Samsung 18260l ma ugbu a, m hapụrụ na-enweghị mkpuchi netwọk, ana m enweta oku mberede. You nwere ike inyere m aka ma ọ bụ gwa m ihe kpatara nke a
Obinna 93 dijo
Ha gafere m ihe nkiri nke samsung galaxy core prime SM-G360T1
Ndewo, ibe ibudata ngwa ngwa adịghị, ọ dị onye maara ma enwere ibe ọzọ?
Zaghachi Luis Montenegro
Nsogbu m bụ na enweghị m ike imelite ngwanrọ nke ekwentị m n'ihi na m nwetara akara ngosi na-ekwu na emelitere ngwaọrụ m n'enweghị ikike, m tinye peeji a na-akpọ Samsung kies.
Echetara m mgbe m hụrụ vidiyo nke enwere ike imelite na ụdị ọhụrụ nke androi ma ọ bụrụ na mgbe m gbanye ekwentị m, m pịa igodo olu elu yana igodo ngbanwu / igodo na igodo mmalite, emere m ya, leta ọ pụtara n'ihu m na-ekwu na Ejiri m igodo olu elu ma ọ bụ ala, emere m ihe vidiyo ahụ kwuru, m wee pịa igodo olu elu ma nwayo nwa bebi na-acha akwụkwọ ndụ pụtara dị ka a ga-asị na ha na-agbanwe ya. Echere m na nkeji ole na ole ka ọ na-aga n'ihu, edochara m ma wepụ batrị n'ihi na ọ naghị agbanyụkarị ma enweghị mgbanwe.
Ọ ga-amasị m ka ị nyere m aka.
Enwere m Samsung galaxy grand prime na ihe nlereanya ahụ kwuru na ọ bụ SM-g530m.
Echetara m mgbe m huru vidiyo nke kwuru na enwere ike imelite ya na nsụgharị kachasị ọhụrụ nke android ma ọ bụrụ na mgbe m gbanye ekwentị m, m pịa igodo olu elu yana igodo ngbanwu / igodo na igodo mmalite, emere m ya na m Akwụkwọ ozi pụtara na-ekwu ka ịpị igodo olu elu ma ọ bụ ala, emere m ihe vidiyo ahụ kwuru wee pịa igodo olu elu ma nwa bebi gam akporo na-acha akwụkwọ ndụ pụtara dị ka a ga-asị na ha na-agbanwe ya. Echere m obere oge ma ka m na-aga n'ihu m wepụrụ batrị n'ihi na ọ naghị agbanyụkarị ma enweghị mgbanwe.
hello francisco enwere m nsogbu na cell m samsung note s4 nwa m chefuru paswọọdụ m enweghị ike ịnweta ya m nwara ya na ọnọdụ nwetaghachi ma naanị ihe nlele gam akporo na-enwu ma ọ dịghị ewegharị ekele ma ọ bụ onye ga-enyere m
Zaghachi ka legna
mgbe ị na wụnye femụwe nke galaxy e7 sm-e700m anaghị agbanye wifi .. nyere aka biko
M na-achọsi ike, ọ bịara pụta na m bi na Cuba na enyi m nyere m Samsung galaxy core prime sm-g360t1 yana dịka ị maara nke kachasị ọhụrụ na mba a na nke mbụ ya n'obodo ahụ enwere ịntanetị na ụfọdụ ebe ọha. via WiFi na nnọọ doro anya na ebe ọ bụ na-ebubo kwa awa. Agbalịrị m ịgbanye ya ọ mere mana etinyeghị m oem unlock na onye nrụpụta ahụ ma kernel ejirila blocker ozi gbochie site na frp ejirila m ego ruo mgbe achọtara m ụkwụ m gbagoro ebe ọ dị. Nwere ike inyere m aka na akara dị irè iji chọta ROM ekwentị samsung galaxy core prime sm-g360t1 by metropc
Zaghachi Julio Efren Moreno
Onye nduzi na ị nwere ike idegara email m Enwere m nsogbu ịdenye aha na sammobile
Rickardo 1996 dijo
nyere m aka na Akaụntụ m na-agbalị ịdebanye aha na SAMMOBILE ruo ụbọchị 2 ma ọ naghị edebanye aha
Ndewo, ụtụtụ ọma, m ga-achọ ka ị nyere m aka enwebeghị ike ịmepụta akaụntụ na sammobile, ọ bụ na achọrọ m ya ngwa ngwa iji budata ngwa ngwa maka galaxy tab 2 10.1 GT-P5110 maka Colombia
Biko nyere m aka !!!!
nwanne murillo dijo
Anyasị ga-amasị m ka ị nyere m aka idozi nsogbu a, na ekwentị m, m na-ahụ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nke FRP na-egbochi, ọ bụ samsung galaxy core prime model SM-G360T1, ọ bụ site na ụlọ ọrụ metro PC na United States, kedu mmemme m kwesiri iwepu nsogbu ahu?
Zaghachi ivan murillo
Kedu maka enyi m n'ihi na nna m ochie pụtara n'ihu m na agbanwere ngwaọrụ m na enweghị ikike, nke ahụ na-eme, achọrọ m imelite ya mana enweghị m ike inyere m aka biko
Zaghachi jesus adriancamacho
G ISN IS B THE ODLỌ NKE PARAGUAY
ezi enweghị m ike ịkachapu a femụwe ebudatara sammobile
Abali oma enwere m Korean Samsung Galaxy S5 model G9006V Achọrọ m ịwụnye sọftụwia ahụ n'ihi na ekwentị na-ahapụ ngwa ahụ mgbe ọ na-abanye na-achịkwaghị achịkwa, onye nwere ike ịnye m ngwanrọ iji wụnye ya.
Anọ m na-agbalị ibudata femụwe n'efu maka galaxy core2 Colombia maka ụbọchị abụọ, na mgbe awa ole na ole na-eche nbudata ahụ, ọ gaghị ekwe ka m mepee faịlụ ahụ, ọ gwara m na ọ baghị uru. Ị nwere ike ị nyere m aka?
Zaghachi vicky saenz
Ndewo, enwere m nsogbu na ekwentị m, agbalịrị m imelite ma ugbu a ị na-achị mgbe niile na enweghị m ike ịbanye na ọnọdụ mgbake, ebudatara m ngwa ngwa, mana Odin nyere m njehie, ị nwere ike inyere m aka, email m bụ abel@portadavision.icrt.cu ihe nlere nke ekwentị Samsung MS-G130HN, bu onyinye sitere na enyi nke bi na BARCELONA
Zaghachi ABEL SALAZAR DIAZ
Ndewo, ọ dị ezigbo mma, achọrọ m ịnweta faịlụ PIT iji gbanye SM_G361F. Mmadu nwere ike inyere m aka.
Ekele m, enwere m GT-S7582 na enweghị m ike ịnweta ngwa ngwa eji ebe a na Venezuela, biko ị nwere ike nyere m aka ịmata onye ejiri ebe a biko? Ma ọ bụrụ na ị nwere ekwentị nke ihe nlereanya a, ị nwere ike ịgafe m data na-egosi na ozi nke ngwaọrụ ebe ọ na-ekwu baseband, mbipute na data ndị ọzọ, biko gbaa m ume.
Mgbe emesịrị melite ssun s8 site na t-mobile enweghị m ike ịkwụsị ya maka na ọ na-agwa m na enwere ụlọ ọrụ na-enweghị ikike weghachite nnwale, ọ na-ajụ m ka m jikọọ na Wi-Fi ma mgbe m mere ọ na-agwa m na enweghị m ohere na weebụ. Kedu ihe m nwere ike ịme?
Kwadoro: Agaghị enwe ụdị 5G nke Huawei P30
A ezi Street Fighter ọgụ egwuregwu na obere Gladiators 2